yakakwira frequency kudziyisa kweplasma | induction kupisa muchina mugadziri | induction kudziya mhinduro
high frequency plasma heat
Induction Kuchenesa Plasma
Nezvekudzikisa Kupisa Plasma
Plasma inoratidzirwa semagetsi emagetsi asingasviki pane zvisizvo zvisingaverengeki uye zvisingaiti zvinyorwa, zvine chekuita zvakakwana zvinenge zero. Kufanana negesi, plasma haina chero yakatsanangurwa mairi kunze kwekunge yakapoteredzwa mumudziyo. Kuti tiite plasma, tinoshandisa mashizha emagetsi kune gesi, nechinangwa chokubvisa magetsi kubva kumigumo yavo inotenderedza nuclei. Izvi zvinogadzira kuvhiringidza kweion uye mafironi emvura asingasunungurwi, ayo anopa pikisi ye plasma, kusanganisira magetsi ayo, magnetic field, uye senzwiro kune kunze kwenyika magetsi.
Chinokosha chinodiwa pakubudisa uye kuchengetedza plasma, inoramba ichiendeswa. Induction ndiyo nzira yakanakisisa yekupa iyo iyo inowedzera simba yekushandisa kwechizvarwa chemaplasma. Zvimwe zvinowanzoshandiswa pakugadzirwa kweplasma zvinosanganisira:
Kurapa kwepamusoro (plasma spray coating)
Etching mu micro-electronics
Kuti tiite plasma, tinoshandisa mashizha emagetsi kune gesi, nechinangwa chokubvisa magetsi kubva kumigumo yavo inotenderedza nuclei. Izvi zvinokonzera mafironi zvinokonzera rusununguko zvinopa kiyi ye plasma, iyo inosanganisira magetsi ayo, magnetic field, uye kunzwisisa kune kunze electromagnetic induction heat minda.
Categories Technologies Tags high frequency plasma heat, induction plasma, kupinza plasma kupisa, Plasma induction, plasma induction heat, radio frequency plasma kupisa